रिलिज भयो 'सेक्शन ३७५' को ट्रेलर, के बलात्कार पिडितलाई ऋचा चड्ढा ले दिलाउनेछिन न्याय ? - Seto Khabarरिलिज भयो 'सेक्शन ३७५' को ट्रेलर, के बलात्कार पिडितलाई ऋचा चड्ढा ले दिलाउनेछिन न्याय ? - Seto Khabar
रिलिज भयो ‘सेक्शन ३७५’ को ट्रेलर, के बलात्कार पिडितलाई ऋचा चड्ढा ले दिलाउनेछिन न्याय ?
२८ श्रावण २०७६, मंगलवार १९:३०
बलीउडमा कोर्टरुम ड्रामामा एक पछि अर्को फिल्महरु बन्दैछ । यसै विषयमा ऋचा चड्ढा र अक्षय खन्ना स्टार ‘सेक्नश ३७५’ को नाम पनि समावेश भएको छ । फिल्मको ट्रेलर आज रिलिज भएको छ ।
ग्लामर उद्योगमा काम गर्ने एक जना कीशोरी र उसँग भएको रेपको कहानीलाई लिएर यो फिल्ममा अक्षय र ऋचा एक–अर्का विरुद्ध मुद्धा लडेको देखिनेछ । फिल्ममा एक पटक फेरी महिला उत्पीडन र बलात्कार लाई अपराधमा लगाउने यो धारा माथि उठान हुनेछ ।
फिल्मको ट्रेलर यूटयूबको ट्रेडिङमा आएको छ, भने यो भिडियोलाई ‘सेक्शन ३७५’ को टिमले यसलाई आफनो सोशल मिडिया एकाउन्टमा पनि शेयर गरेका छन् ।
फिल्मको ट्रेलर हेरेर भन्न सकिन्छ कि अक्षय बलात्कारको आरोपीका वकील हुन भने ऋचा कुनै पिडितलाई न्याय दिने कोशिश गरीरहेको हुन्छिन । अजय बहल द्धारा निर्देशित यो फिल्ममा राहुल भाट र मीरा चोपडा पनि छन् । भुषण कुमार, किशन कुमार, कुमार मंगत पाठक र अभिषेक पाठकद्धारा यसलाई निर्माण गरीएको हो । फिल्म १३ सेप्टेम्बरमा रिलिज हुदैछ ।